Shir loogu magac darray “Cafis”oo lagu qabanayo magaaladda Turku ee Finland | Somaliska
Hortaanta bisha luulyo ee fooda inugu soo heeysa ayaa lugu wadaa in magaaladda Turku ee Dalka Finland lugu qabbto shir loogu magac darray Cafis. Shirkan oo ah kii ugu horeeyey ee noociisa ah oo ay qabato qurbo joogta soomaalida, ayaa waxaa ka qeyb geli doona weriyeyaaal iyagu qeyb ka ah ollahan loogu magac darray Cafis.
Shirkan oo ah kii ugu horeeyay ee nuuciisa ah ee wadanka Finland lagu qabto ayaa waxaa labada maalmood oo uu socdo lagu soo bandhigi doonaa doodo cilmiyeysan iyo kuwa furan, barnaamijyo iyo tusaalooyin tayeysan oo gundhig fiican u noqon kara dadaalada socda iyo barnaamijyada dib-u-heshiisiineed ee mustaqbalka. Sidoo kalw waxaa shirkan iska kaashaday urruradda Guddiga difaacayaasha nabadda Finland (Rauhan Puolustajat) iyo saxafiyiin Soomaliyeed oo qaarkood ka howlgala warbaahinta Finland iyo qaaradda Yurub.
“Mar hadjii ay iska caddahay in warbaahintu tahay seef labo afle ah oo wanaag iyo xummaanba loo adeegsan karo annaguna aan bahda xirfadda warbaahinta ku abtirsanno ayaaan go’aansanay in aan adeegsanno warbaahinta si aan farriinta Cafis u gaarsiinno Soomaalida” ayuu yiri Wali Xaashi oo ah madaxa ollalahan loogu magac darray Cafis islamarkaasina ka howlgala warbaahinta dalkaasi iyo werfidiyeeno kale.
Shirkan ayey qaban qaabiyeyaashu ku sheegeen inuu yahay olole loo adeegsanayo warbaahinta soomalida oo dhan, si ay noqoto mid gaarta soomaalida meel kasta oo ay joogaan. Ololahan ayaa sidoo kale lagu doonayaa in lugu lamaaniyo dhaqan Cafis oo aan laheyn sharuud laguna qaban doono goob kasta oo ay soomaalidu joogto .
Weli Xaashi, waa suxufi ka tirsan telefeyshinka Yyle ee Filand waana madaxa shirka Cafis ee ka fumayo Finland.
”Waxaan ku dadaali doonaa in meelkasta oo aan ololaha ku qabanno isugu keenno dad ama beelo dhibaato kala gaartay oo diyaar u ah in ay iscafiyaan wixii dhib kala gaarayna xalay dhalay ka noqdaan’ ayuu yiri Cabdi Muuse Maxamud oo kamid ah wariyaasha qeyb ka ah ollalahan loogu magac darray Cafis ee dhawaan lugu qabanayo dalka Finland. Kuna sii daray hadalkiisa in tani biloow fiican u sal noqon doonta dhaqan is cafis oo soomaalida dhexdeeda ka bilowda.